DF Soomaaliya oo Muqdisho ku xirtay guddoomiye ku xigeenkii gobolka Gedo (Maxaa cusub?) | HalQaran.com
DF Soomaaliya oo Muqdisho ku xirtay guddoomiye ku xigeenkii gobolka Gedo (Maxaa cusub?)
Muqdisho (Halqaran.com) – Gudoomiye Ku-xigeenka Gobolka Gedo, Maxamed Xuseen Isxaaq (Alqaadi) ayaa waxaa lagu xiray Magaalada Muqdisho, ka dib markii qaab shirqool ahaa lagu keenay magaalada.
Guddoomiye Ku-xigeenka ayaa waxaa Khamiistii Magaalada Muqdisho lagula xiray Gudoomiyaha Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo, Ismaaciil Cabdi Sheekh Qorax (Koofi).
Labadan nin ayaa waxaa qaab wadahadal ah Magaalada Muqdisho ugu soo kaxeeyay Taliyaha Guutada 10aad, Qaybta 43aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, G/sare Maxamad Caddow Cali (Sanka). Taliska Guutada 10aad ee Qaybta 43aad ayaana ka hawlgala Degmada Baardheere.
Taliyaha ayaa labada masuul ka dhaadhiyay inay Magaalada Muqdisho u raacaan, sababo ku aadan Madaxda Qaranka oo dooneysa inay kala hadlaan arrimaha Gobolka Gedo.
Alqaadi iyo Qorax ayaa ahaa labada masuul ee keliya ee Gobolka Gedo, ee u daacadda ahaa Maamulka Jubbaland, halka intii kalena ay goor hore taageereen Dowladda Federaalka, ka dib khilaafkii Villa Somaliya iyo Jubbaland.
Labadan nin ayaa waxay dhawaan ka horyimaadeen dhaqdhaqaaqyada ciidan, ee ay Dowladda Federaalka ka waddo Degmooyinka Gobolka Gedo.
Ciidamada Booliska ee Garoonka Aadan Cadde ayaa labada masuul u sheegay inay xarig yihiin, wax yar uun ka dib, markii diyaaraddii ka keentay Degmada Baardheere, ay ka soo cago-dhigatay Garoonka Magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyn, xariga raggan ayaa waxaa loo arkaa mid ay shirqoolkeedu laheyd Dowladda Federaalka, isla-markaana ay soo xiristooda u adeegsadeen Taliyihii Ciidanka Militariga ee Degmada Baardheere, Maxamed Sanka.
Gudoomiye Ku-xigeenka Gobolka Gedo
Maxamed Xuseen Isxaaq (Alqaadi)